All Na Otu / Retail ikanam Poster
Warara Pixel Ẹtop Videowall / HD Ikanam Screen
N'èzí ofu Ikanam Screen Ogbi
N'èzí Energy vingchekwa Ikanam Display
Ihu n'ihu Nọgide Na-egosipụta Ikanam
Ime ụlọ ofu ikanam Display
Ogbo Ikanam Display
Uzo Ikanam Screen / Facade Mgbochi Ikanam Display
Stadium Perimeter Sport ikanam ihuenyo
Mkparịta ụka na-agba egwu mmekọrịta ọkụ
Smartshelf ikanam Pụrụ Iche Display
Mgbanwe / Creative Soft LED Display
Ikanam Module Display
Ikanam Display Ngwa
Ikwunye egwu na-akpọ akwụkwọ mmado
HD Warara pixel pitch
N'èzí gosipụtara ihe ngosi
Ihu mgbazinye ogbo gosipụtara
Smartshelf dugara mkpado ọnụahịa
The mkpa n'etiti Ikanam Display Okpomọkụ mgbasa na Gold Ma ọ bụ Ọla kọpa Ikanam Mgbawa wires
Uru dị n’etiti Ikanam Ngosipụta Okpomọkụ Mgbapu na ọla edo Ma ọ bụ ọla kọpa Ikanam Mgbawa Wires heard nụla banyere ilu ochie “naanị ị nweta ihe ị kwụrụ”. Gịnị banyere “ị gaghị enwe ike iji obere akpa mee silk”? Nke a abụghị blog banyere ị ole bekee ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu mpaghara, kama ọ bụ nke ...
Nzukọ Nka na ụzụ Banyere mkpa nke pikselụ pitchs, ilele anya na ikanam gosipụtara nha.
Nzukọ Nka na ụzụ Maka mkpa nke pikselụ pitch, ilele anya na ọkụ gosipụtara nha. Ihe nrụnye mgbidi mgbidi LED na-aga n'ihu ịgbanwe oghere gburugburu ụwa. Urcheslọ ụka, ụlọ akwụkwọ, ọfịs, ọdụ ụgbọelu na ndị na-ere ahịa na -emepụta ahụmịhe, ike, echefu echefu na ọtụtụ indo ...
Ka anyị kwuo maka ihe gbasara ihe ngosi 3D na - egosipụta n’ihe ngosipụta na - ewu ewu.
Ihe ngosi 3D LED na-enweghị iko, a na-akpọkwa 3D 3D LED ngosi, nke a na-ahụkarị n'ime ngosipụta nke ime ụlọ, mana obere nha na iko ndị ọzọ maka ndị na-ege ntị ọ bụla chọrọ. Taa, Yonwaytech ga-achọ ka gị na gị kparịta ụka ihe gbasara anya ọtọ anya 3D anya gosipụtara. Dị ka mgbawa ...
Gini Ka Ike Ichekwa Ikanam Display Puru Ime Maka Azụmaahịa Mgbasa Ozi Gị?
Gini Ka Ike Ichekwa Ikanam Display Puru Ime Maka Azụmaahịa Mgbasa Ozi Gị? Ichekwa ike gosipụtara, akpọkwara Common Anode Led screen. Chipsetị LED ahụ nwere njedebe abụọ, anode na cathode, na agba LED zuru oke nwere chipset atọ LED. (acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -acha anụnụ anụnụ). Na traditi ...
50 SQM N'èzí P3.91 Stage Rental LED Display Dị Njikere Iji Nyefee United State.
N'èzí ogbo mgbazinye p3.91 nke a kwakọbara nke ọma na agba agba ahaziri iche maka ịbigara onye ahịa anyị USA. Die-casting aluminum aluminum 500mm × 500mm Ikanam ogwe aka dị mfe karị na ntinye, mkpofu na njem site na ọkụ ọkụ na arụmọrụ arụmọrụ. 3840hz tuondu onuego video ...
Kedu ihe dị iche n'etiti ngosi ọkụ ọkụ edoziri edozi na ihuenyo ikanam ụlọ?
Kedu ihe dị iche n'etiti ngosi ọkụ ọkụ edoziri edozi na ihuenyo ikanam ụlọ? E jiri ya tụnyere ndozi igwe eji arụ ọrụ, isi ihe dị iche iche nke mgbazinye mgbazinye ụlọ bụ na ọ dị ha mkpa ịkwaga ugboro ugboro ma wepu ya ma wụnye ya ugboro ugboro. Ya mere, ihe achọrọ maka ngwaahịa dị ...
You maara ihe dị iche iche nke LCD, Ikanam na OLED?
site ha na 21-02-14
You maara ihe dị iche iche nke LCD, Ikanam na OLED? A na-akpọ ihuenyo ngosipụta otu n'ime ihe ndị kachasị ukwuu na narị afọ nke 20. Ọ karịrị akarị. Ndụ anyị dị ebube n'ihi ọdịdị ya. Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ihe ngosi anaghịzi adị ...
YONWAYTECH ikanam ngosi China Lunar New Year Spring Festival
Chinese Lunar New Year Spring Festival na-eru nso. Anyị ga-achọ ịgwa gị na ezumike anyị a ga-ebido n’abalị abụọ nke ọnwa Februwarị. ruo 19th, Feb. Anyị nwere ekele maka nkwado ntụkwasị obi gị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na WhatsAPP ma ọ bụ Wechat +86 138 2358 7729 maka mkpa ọ bụla dị mkpa n'oge ezumike ahụ. Ozi ịntanetị w ...
Trefọdụ Ntanetị ringkekọrịta Na-agbanwe agbanwe Mịịlịlị Module Display.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ngosi Ikanam na-emezigharị mgbalị ya na mpaghara akara ngosi dijitalụ. Site na ịrị elu ahịa na-arịwanye elu nke ihu igwe dijitalụ, ihe achọrọ maka ngosipụta LED pụrụ iche na-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye, na ọmụmụ nke ihe ngosi LED nwere ike ịchọta ihe a chọrọ, na ihe okike dugara ...
800Pcs Ime ụlọ P2.5mm 160mm × 160mm Amụma Mbadamba Mbadamba Emechiri Emebi na Nnwale Aging, Na Nkwakọba Ihe Ọma, Zigara Mexico Ahịa Site DHL.
Ndị ahịa ahịa 800Pcs Mexico P2.5mm 160mm × 160mm Amụma Mbadamba Mbadamba Emechara Emezigharị na Nnwale Aging, Na Nkwakọba Ihe Ọma, Zigara Ndị Ahịa Site DHL N'ime ụbọchị 5. Ekele dịrị ndị ahịa anyị. Pixel Ẹtop: 2.5mm. Ọkụ: Nationstar SMD 2121. Ọnụ ọgụgụ nke modulu: 800 PC. ...
Tumadi ọcha nke a ezi mma ọkọnọ nhọrọ maka gị ruru eru ada ngosi.
Isi nke ato: Ikanam Ikanam Power Tụkwasịnụ / Ikanam Screen Ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ada ngosi dị ka obi siri ike maka mmadụ. Ihe ngosi ọkụ ejiri nwayọọ nwayọọ ghọọ ngwaahịa ndị dị n'ahịa nke dijitalụ n'èzí nke ụlọ, a pụkwara ịhụ ha ebe niile na facad ụlọ n'èzí ...
Ihe kachasị dị mma maka ngosipụta dị mma? Isi nke Abụọ: Ikanam ihuenyo ọkwọ ụgbọala IC
Isi nke abụọ: Ọkwọ ụgbọ ala, akụkụ nke abụọ kachasị mkpa maka ngosipụta. Ọ bụrụ na oriọna ndị a na-ahụ dị ka ahụ mmadụ, mgbe ahụ, onye ngosi ngosi ngosi LED bụ IC bụ isi ihe dị ka usoro nhụjuanya nke ụbụrụ mmadụ, ọ bụkwa ya na-ahụ maka ahụ anụ ahụ na echiche uche ...